mawduucyada iMovie / arrimo u isticmaala Mac
1.1 wmv in iMovie
1.2 MTS in iMovie
1.3 FLV in iMovie
1.4 MOV in iMovie
1.5 M4V in imovie
1.6 VOB in iMovie
1.7 Mpg in iMovie
1.8 mod in iMovie
1.9 AVCHD in iMovie
1.10 AVI in iMovie
2.1 dar Text / subtitles / qoraalka
2.2 dar Music inay iMovie
2.3 iMovie Raadka
2.5 iMovie isjiidka
2.6 Picture in Picture
2.7 Samee Motion gaabis ah
2.8 beddesha Video
2.9 Screen Split
2.10 Ku dar iMovie-guur
2.11 Samee Time-burayaa Movie
2.13 clip Split
2.14 Dalagga Video
2.15 Voiceover in iMovie
2.16 Set muuqa
2.18 Zoom ee ku iMovie
2.19 Negaanshaha Shaky Videos in iMovie
3 Import & dhoofinta
3.1 Qaabka iMovie
3.2 iMovie in Lugood Library
3.3 dar-safeeyuhu in iMovie
3.4 Mashaariicda Save iMovie
3.5 YouTube Videos in iMovie
3.6 Mashaariicda dhoofinta iMovie
3.7 iMovie in DVD
3.8 iMovie Video inay iCloud
4 lagu bedelan karo
4.1 Ka Badeli kara ee PC
4.2 Ka Badeli kara ee Android
4.3 Online iMovie lagu bedelan karo
5 Talo & Tricks
5.5 iMovie Dulucda / arrimo
5.6 iMovie Tiyaatarka
5.7 jeeda iMovie
5.10 iMovie 9 Talooyin
5.11 iMovie 10 Talooyin
5.12 iMovie 11 Talooyin
Ciidamada 5.13 Screen
20 Top iMovie mawduucyada / arrimo u isticmaala Mac
Waa mid ka mid ah qaababka ugu horumarsan ee iMovie oo hubi in ugu fiican oo gobolka ka mid ah mawduucyada tahay iyo arrimo waxaa lagu soo bixi, waayo, iMovie si khariidad ma aha oo kaliya kaamil ah laakiin user sidoo kale helo dareen ah oo waafaqsan mashruuca in la sameeyo. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira, waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay la raacay iyo ugu fiican ayaa waxaa sidoo kale u dhiibay in mar si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo. Tutorial Tani waa dhan oo ku saabsan mawduucyada iMovie sare iyo fulintiisa.
Qaybta 1. Top 20 iMovie mawduucyada / arrimo u isticmaala Mac
Qaybta 2. Sidee si ay u helaan mawduuc iMovie / arrimo ka iDVD
Qeybta 1: Top 20 iMovie mawduucyada / arrimo u isticmaala Mac
Hoos waxaa ku qoran 20 iMovie mawduucyada hogaanka u isticmaala Mac si loo hubiyo in quruxda kordha barnaamij ay si weyn u fidiyaa:
1. Sports theme
Waa mid ka mid ah kuwa mawduucyada in la hubiyo in user helo ugu fiican iyo gobolka of view tahay dhigi lahaa oo waxaa gaar ahaan loogu talagalay dadka jecel isboortiga. Si aad user ugu fiican ee theme waxaa lagula talinayaa in ay eegno video YouTube ku saabsan isku maadada.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=L6T_2OxI8Es
Theme 2. sawrirrada
In kastoo waa adag ku khariidad laakiin weli waa mid ka mid ah mawduucyada ugu wanaagsan ee loo isticmaalo kuwaas oo doonaya in ay arkaan ay u saftay iMovie xagal ka duwan. Waxaa gebi ahaanba waa mid lacag la'aan ah oo lagala soo bixi karaa website-ka rasmiga ah iMovie
URL YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Cg9lMieW2MI
3. News Mowduuca
Weli theme kale oo xiiso leh in ka tagayo aamusay user sida uu yahay mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo tan gobolka ee barnaamijka fanka oo u oggolaan doonaa user ay u isticmaalaan software si qoto dheer gaar ahaan haddii user jecel yahay si uu u daawado wararka iyo arrimaha taagan ka.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=upHXtgX0OOI
Theme 4. Film strip
Waa theme ugu fiican si loo hubiyo in user ku qabsatay oo dhan reyn iyo madadaalo markii baxay safar qoyska. Sidoo kale waa mid ka mid ah mawduucyada ugu fiican si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira, marka ay timaado in filimada toogashada.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uBLJjtFYYJE
5. Veritas theme
Waa mid ka mid ah mawduucyada ugu isticmaalay ee Zaman oo casri ah oo aragti ay tahay oo keliya mid ah sida toolbar yar. Badhamada iyo sidoo kale qaabka ugu fiican iyo dadka isticmaala ee doonaya in ay u isticmaalaan wax fudud ayaa lagu talinayaa si loo hubiyo in theme la soo bixi.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=h6U7R6ouc94
6. Wiyisha theme
In kastoo user u baahan qabanayaan shaqo badan halka ku rakibidda mawduuca laakiin ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay waxaana lagu soo gudahood ah. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo waayo-aragnimo siladda ugu fiican oo aan fiicnayn in arrintan la xiriira.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aI5YjSIdYl0
Tani waa ujeedada laga heli karaa labada iftiin iyo midabka madow iyo sabab la mid ah waxa ay kulan baahida iyo dalabaadka ka mid ah dadka isticmaala kala duwan ee adduunka oo dhan. Waa mid ka mid ah mawduucyada ugu caansan ee xilligii casri ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7pC6QxDwJSA
Waa theme caqli badan taas oo ka dhigaysa hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah qalab barnaamijyada farshaxanka waxaa kaloo la siiyaa user-u-habeynta mawduuc sida baahidaada. The noocyada mugdi ah oo dabacsan hubiyo in uu noqdo doorasho kama dambaysta ah ee user.
URL YouTube: : https: //www.youtube.com/watch v = WmA9-M3yn5g?
9. Kaer B3
Waa duluc ah oo la si gaar ah loogu talagalay dadka isticmaala kuwaas oo doonaya in ay interface iMovie si ay u eegaan xirfadeed ka qayb kasta .Tani waxa theme fudud weli ayaa loo arkaa theme ugu soo bixi waayihii casri ah downloads ah mar walba sii kordheysa.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WJ6TCPwOXsg
10. Aqua muhim
Theme waa inuu xaqiijiyo in filimka ama mashruuca dhigay on iMovie uu noqonayaa ciyaaryahanka ugu fiican iyo weliba hubinayaa in ugu fiican oo gobolka ka mid ah qalabka farshaxanka sidoo kale la siiyaa si user ah si ay u maareeyaan mashaariic kala duwan oo si fudud oo ku qanacsan.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KNeo55BpsCE
11. theme Ifid nolosha
Haddii user a doonayo in la hubiyo in iMovie uu noqdo noole iyo sidoo kale u muuqataa midabo arrintan la xiriira waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in mawduuca soo bixi, si user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah hawlaha farshaxanka gundhig gudahood ah.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=i5rT_m-rlwg
12. Balanbaalis iyo ubaxyo
Waa mid ka mid ah mawduucyada ugu fiican oo aad u hubiso in user helo ugu fiican si ay ugu ekaato iMovie iyo sidoo kale qaabka guud ee editor ay noqoto sida ugu fiican ee waqtiga oo dhan. Waxa kale oo hubin doona in user helo eegno xirfadeed oo dhan.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2Pl_YlP8YwE
Maalin 13. School
Xasuusanaya xusuus jir waa wax dhammaan dadka isticmaala jecel oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in helaan galay mawduuca kaas oo sidoo kale hubin doona in doorashada guud theme noqdo fudud.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fncevAM9R5E
Socodka 14. Photo
User waa in la hubiyo in marka aad isticmaalayso iMovie sida editor sawir mawduuca waxaa loo isticmaalaa si loo hubiyo in shaqada uu noqdo mid fudud oo natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa sameeyo.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Xj6h8lnSprE
Xusuus 15. Album
Mar labaad qaadashada mawduuca tixgelin hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah xulashada theme tahay oo aan wax arrintan oo dhibaato ka dhigi doonaa. Wuxuu ka kooban yahay dhowr ah qalab loo baahan yahay in wax ka bedel sawir habka ugu fiican.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=G-zERbBCJMQ
16. Ka xiddigaha
Mid ka mid ah mawduucyada ugu fiican oo la hubiyo in user helo natiijooyinka ku jira line shuruudaha mashruuca ka dhigi lahaa. Waa mawduuc in sidoo kale si fudud oo aan arrinta wax beddeli karaa.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=grUBu1qomBU
Sida magacaba ka muuqata mawduuca waa inuu xaqiijiyo in user helo ugu wanaagsan ee reer iMovie iyo theme dhabta ah oo qurux badan u muuqataa. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay ahbaa aan arin kasta.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QJzXN8G71lk
18. Red kacay theme
Waa mawduuc oo kaliya in uu leeyahay aragti xirfadle ahayn, laakiin weli waxaa lagala soo bixi, rakibay oo ammaanay inta badan dadka isticmaala ee dunida oo dhan ay sabab u tahay muuqaalka iyo design.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=byQTZ_TxD3A
19. Gabayga si Hooyo
Theme waxa uu leeyahay dhowr ah muuqaalada gundhig oo aan suurto gal ah in la qoro ay sabab u tahay sharaxaad gaaban laakiin waxaa lagula talinayaa in ay ka soo dejisan mawduuca si loo hubiyo in natiijooyinka la arko si deg deg ah.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RcSOmYvUaBo
Duufaanka 20. Galactic
Waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oo mugdi ah mawduucyada in ay diyaar u yihiin iMovie. Waxay ka dhigaysa hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay ahbaa aan arin kasta.
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=K8wyaWNC1qE
Sidee si ay u helaan mawduuc iMovie / arrimo ka iDVD
Ka dib waa habka ay tahay in la codsatay in arrintan la xiriira si loo hubiyo in natiijada ugu wanaagsan oo waafaqsan shuruudaha laga helo.
1. iDVD waa in la bilaabay in la bilaabo nidaamka:
2. Mashruuc cusub oo markaas waa in la abuuray oo cabirku saxda ah arrin:
3. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in theme saxda ah waxaa loo hawlgeliyaa iDVD:
4. theme ayaa markaa waa in la kartoo in ay sii wadi:
5. button map ayaa markaas waa in la sii adkeeyey si aad u hubiso in content video la dhoofiyo:
6. Habka in uu yahay soo socda in la raaco waa File> mooyee sida image disk:
7. Habka bilaabi doonaa in ekaan doonto sida DVD gubashada:
8. file Video_TS yahay markaas in laga heli:
9. From URL http://www.squared5.com/ convertor waa in la soo bixi si loo hubiyo in faylka video_TS waa diinta .DV file kordhinta iyo tan ayaa sidoo kale ku dhameysan doona habka sida file DV tani si fudud lagu hagaajin karo sida mawduuc in iMovie:
iMovie: talinayo iMovie plugins & Tools Faa'iido leh
Sida loo dar subtitles in Videos iyo Movies in iMovie
5 talooyin iMovie masraxa Mac
Sidee si ay u wadaagaan iMovie video in iCloud
Sida loo soo dhoofsadaan mod in iMovie
Sida loo filtarrada daro in iMovie on Mac
Sida loo dar-guurka ee iMovie on Mac / iPhone / iPad
Sida loo abuuro Movie isjiidka iMovie
> Resource > iMovie > Top 20 mawduucyada iMovie / arrimo u isticmaala Mac